Fiber Optic Connector Fast, Cable Optical Fiber Armored - Qingying
Fiber Optic Fast Connect
Ny portfolio-n'ny fibre optika be dia be sy mifantina miaraka amin'ny fanatrehantsika matihanina dia manome antoka ny valin'ny mpanjifa haingana, ny fahaiza-manao ara-teknika ary ny faharetana hiasa amin'ny alàlan'ny fanamby mety atolotra ny orinasa kely sy lehibe.
Fahamendrehana ataon'ny mpanamboatra
Ekipa R&D alohan'ny asa
Fampisehoana fitaovana fitiliana
3D sary ny vokatra
Fikarohana momba ny fihaonambe
Assembly Connector haingana
Toerana famokarana adaptatera
Toerana famokarana tariby fibre
Tapitra ny Inspecition amin'ny tarehy
Fitsapana ny fidirana sy ny fisaintsainana
Niorina tamin'ny 2010, Dongguan Qingying Industrial Co., Ltd. (QY) dia orinasa fibre be pitsiny hita any amin'ny tanàna roa, Dongguan sy Chongqing, any Shina. Miaraka amin'ny velaran-javamaniry maherin'ny 10.000m2, QY dia orinasa manana fahaiza-manao R&D, famokarana, varotra ary varotra iraisam-pirenena. QY dia orinasa voamarina ISO9001, ROHS, CE miaraka amina mpanjifa an-jatony any Eropa, Amerika, Azia atsimo atsinanana ary aostralia. Ny vokatray lehibe indrindra dia ny mpampitohy azo apetraka amin'ny optika (mpampitohy haingana), adapter, tadim-pohy, tady mitazona vy, pigtail, mpizara PLC, attenuator, ary vokatra FTTH maro hafa. Miaraka amin'ny traikefa 12 taona amin'ny indostrian'ny fibre optika, QY mino fa ny fianarana, ny fiaraha-miasa ary ny fizarana amin'ny mpanjifa no fomba tsara indrindra hitomboana amin'ny mpanjifa. Ao anatin'ny folo taona ho avy, QY dia hampiroborobo mahery vaika ny vokatra vaovao isaky ny fangatahan'ny mpanjifa, ary hanatsara ny kalitaon'ny vokatra efa misy ho an'ny mpanjifa. Ny mpiasan'ny QY rehetra dia manantena ny hanompo sy hiara-hiasa amin'ny mpanjifa ho an'ny orinasa fibre amin'ny ho avy.
Androany Qingying dia ekena tsara amin'ny indostrian'ny serasera fibre ataon'ny mpanjifa manerantany.
NY CLIENTS ANAY Androany Qingying dia ekena tsara amin'ny indostrian'ny serasera fibre ataon'ny mpanjifa manerantany. Fomban-drazana mitarika eo amin'ny teknolojia, ny kalitaon'ny vokatra ary ny serivisy ho an'ny mpanjifa no nahatonga ny orinasa hitombo haingana Qingying izao dia nanao fandrosoana mafy. Manohy manaraka ny filan'ny fitomboana hatrany i Wle ary miezaka ny hanana fahombiazana.
St Duplex Connector, Fast Connector, Fiber Fast Connector, Connector azo ampidirina an-tsaha, Adaptary Connector Fiber Optic, Fitaovana tariby fibre optika,